လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူ အများအပြားပါဝင်
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အကျဉ်းသား ၁ သောင်း ၁ ထောင့် ၅ ရာကျော်ထဲမှာ လူသတ်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၂၃၀၀ ကျော်၊ သားမယားအဓမ္မပြုကျင့်မှု (မုဒိန်းမှု)နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၁၇၀၀ ကျော်၊ လုယက်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ ၅၀၀၀ ကျော် ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မနေ့ကကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Eleven Media သတင်းကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါ့ပြင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ ၁၈၁ ဦးရှိတဲ့ထဲက ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၃၃ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၇၁ ဦးကိုလည်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြည်ထဲရေး ဒုတိယဝန်ကြီးက လွှတ်တော် မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အကျဉ်းသား ခုနှစ်ထောင်နီးပါးကို သမ္မတက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ထဲ နိုင်ကျဉ်းတွေပါဝင်မှု နည်းတဲ့အပေါ် ဝေဖန်
အကျဉ်းသား ၉၅၀၀ ကျော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးဖို့ကိစ္စ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် စာတမ်းပြုစု
အကျဉ်းသား ၂၅ဝ ကျော်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
အထူး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ဒေါက်တာ ထွန်းအောင် ပြန်လွတ်
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်း ကို အသည်းအသန် အကောင်အထည်ဖော်
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကိုအသည်းအသန် ပေါင်းဖို့
လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူ အများအပြားကို အသည်းအသန် ပြန်လွှတ်ပေး
Jan 27, 2016 05:59 PM
နေရပ်- ငရဲ တပိႆ ာ
လွတ်ငြိမ်းခ ျမ်းသာခွင့်ပေးလို့ ရတဲ့ကောင်းက ျိုးထက်
လွတ်သွားတဲ့လူဆိုးတွေက အမှု ပြန်က ျူ းလွန်လို့
ရတဲ့ဆိုးက ျို းက ပိုကြီးနိုင်ပါတယ်။
Jan 27, 2016 02:21 PM
Human life has no special value in Burma. A murderer will serveaprison term for onlyafew years unlike in other countries. Ten years' sentence foramurder is too lenient.
Jan 27, 2016 01:04 PM
ဒီလူေတြ သူ႕ဆီမလာဘူး လို႔
နေရပ်- ဘယ္သူ အာမခံ တုန္း
လူသတ်မှုနဲ့ ၂၃၀၀ ကျော်၊
မုဒိန်းမှုနဲ့ ၁၇၀၀ ကျော်၊
လုယက်မှုနဲ့ ၅၀၀၀ ကျော် ..
အဲဒီထဲက (၁%) ကပဲ ပြစ်မှုပြန်က ျူ းလွန်တယ်ထား။ မတွေးဝံ့စရာပါပဲလား ဘစိန်ရယ်..။
Jan 26, 2016 10:57 PM
VOM တည်ထောင်သူ သေဒဏ်တိုက်မှာ အချုပ်ခံထားရ